Fampielezan-kevitra : Tsy azo atao anatin’ny trano fivavahana -
AccueilRaharaham-pirenenaFampielezan-kevitra : Tsy azo atao anatin’ny trano fivavahana
Notsindrian’ny Ceni manokana, nandritra ny fihaonan’izy ireo tamin’ny solontenan’ny kandidà omaly, ny fitsipika tokony harahina mandritra ny fampielezan-kevitra. Isan’ny notsindrian’izy ireo tamin’ izany ny voalazan’ny andininy faha- 57, mikasika ny lalàna fototra mifehy ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka. Milaza io andininy io, fa tsy azo atao ny manatanteraka fampielezan-kevitra anatin’ny toeram- pivavahana. Tranga mety hisy ny tsy fahafehezan-tenan’ny kandidà noho ny hamaroan’ny mpivavaka, ka handika lalàna. Manoloana io fihetsika tsy fanarahan-dalàna mety ataon’ ny kandidà io, dia mety ho voafitaka ny haino aman-jery, ka hitatitra sy handefa izany amin’ ny fahitalavitra. Antony nanambaran’i Thierry Rakotonarivo filoha lefitry ny Ceni, fa « misy ny antsoinay hoe didy folo, izay mifehy ny serasera sy ny fampitam-baovao mandritra ny fifidianana. Ireo didy ireo dia ny lalàna no nametraka azy, ka nampahafantarina ny kandidà » hoy ny fanazavany. Isan’ny manana andraikitra amin’ny fampitana ny vaovaon’ny kandidà ireo ny haino aman-jery, noho izany dia tokony ho mailo raha toa misy ny kandidà izay minia sy mikasa handefa izany.
Satria efa raran’ny lalàna ny fanaovana fampielezan-kevitra anatin’ ireny toeram-pivavahana ireny, dia misy ihany koa ny sazy mifandray amin’ izany. Nambaran’ i Thierry Rakotonarivo fa « mety ho sazy azo raisina ohatra izao raha minia mandika io lalàna io ilay kandidà, ny mety ho fanafoanana ny vato azony anatin’ ny faritra nandikany lalàna. Ny fitsarana, izany hoe ny HCC ihany anefa no manana andraikitra amin’ izany ». Raha sanatria tokoa mantsy mety hahazo sazy noho io tsy fanarahan-dalàna io ny kandidà, dia mety hanome tsiny ilay haino aman-jery nandefa izany. Satria porofo mitohoka amin’ ny tenda ny sary izay taterin’ilay haino aman-jery, ary mety ho tonga hatramin’ ny disadisa eo amin’ ny roa tonta. Mba hialana amin’ izany, dia natsangan’ny Ceni sy ny ORTM ny komity manara-maso ny horonan-tsary fampielezan-kevitra alefa amin’ ny haino aman-jerim-panjakana. Marihina fa isan’ny notanterahina omaly teny amin’ny Ceni, ny antsapaka amin’ny fandehanan’ny vaovaon’ny kandidà ao amin’ ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM. Ny kandidà izay hahazo 3 minitra ivelan’ny vaovao, ary 1 minitra sy sasany kosa anatin’ny fampahalalam-baovao, ankoatra izay ny fandaharana ny valandresaka arahina adihevitra. Fa ankoatra izay voalazan’io andininy faha- 57 ny lalàna fototry ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny tokony hanajana ny firaisam-pirenena sy ny fihavanana Malagasy, ary ny fanajana sy tsy fiandanian’ny fitondram-panjakana, sy tsy fitanilan’ny raharaham-bahoaka.